Herin’ny Masoandro Isan-Tokantrano Mamarana ny ‘Fanavakavahana Ara-Kerinaratra’ ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2014 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , русский, Français, Español, Deutsch, polski, 日本語, বাংলা
Elektrisite, ilay zavatra mahatonga anao hahita izao lahatsoratra vakianao izao, moa mba fantatrao fa tsy mba tonga any amin'ny 45 isanjaton'ny mponina ao Bangladesh. Mbola vitsy noho ny atsasaky ny mponina ambanivohitra ao amin'ny firenena aza no mba manana herinjiro ao aminy. Izany no mahatonga ny Solar Home System Project [Tetikasa Masoandro isam-Baravarana], natomboka tamin'ny 2007, ho vaovao manokana ho tena tsara hoan'i Bangladesh. Fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny Infrastructure Development Company Limited (tetikasa iray tohanan'ny Banky Mondialy) izay ny fitantanam-pitondrana no tompony sy ireo ONG 40 (tafidita amin'izany ny orinasa tsy miankina sy ireo sampandraharaham-pampindramam-bola) ny Tetikasa Masoandro isam-baravarana izao nahavita nitondra herinaratra sy fahazavana tamin'ny tokantrano 3 tapitrisa, izay mahatratra mponina mihoatra ny 20 tapitrisa.
Vao haingana teo i Bangladesh no nankalaza ny fahombiazan'ny fametrahana fitaovana 3 tapitrisa mitondra herin'ny masoandro isan-tokantrano. Taratry ny asa mafy vita izany fahatontosan-javatra izany. Naomi Ahmad nihora-pifaliana tamin'izany fety izany tamin'ny sioka iray tamin'ny fiandohan'ity volana ity:
Greenpeace namaly tamim-pifaliana ity tetikasa ity, mametraka ny tetikasa ho manampy amin'ny fametrahana ny revolisionin'ny angovo avy amin'ny masoandro:
Mametraka fitaovana mitondra ny angovon'ny masoandro ao an-tokantrano eo ho eo amin'ny 65000 isam-bolana ny Bangladeshis. Nanadihady ny antony mahatonga ny fitaovana mitondra ny angovon'ny masoandro ao an-tokantrano ho malaza i Zubair K M Sadeque, mpandalina manokana momba ny angovo. Notanisainy ny antony izay ahitana fiakaran'ny fidirambolan'ny any ambanivohitra, fampindramam-bola madinika matanjaka tohanan'ny ONG ao an-toerana, sy ny fivoarana nateraky ny fahazavana LED.
Mahita ny lalany ao amin'ny fambolena ihany koa ny angovon'ny masoandro. Nankato ny fananganana paompy fampidiran-drano miisa 191 miainga amin'ny herin'ny masoandro ihany koa i Bangladesh (Efa tafapetraka sy miasa ny 69). manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fandraharahana ambanivohitra ihany koa ny angovo avy amin'ny masoandro. Afa-manokatra ny fivarotany enta-madinika, fivarotana fanafody ary toera-pisotroana sy fialam-boly hatramin'ny alimbe koa ireo Tambanivohitra. Mampiakatra ny ora fiasana, fidirambola ary ny fari-piainana izany toe-javatra izany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana asa ny 40 isanjaton'ny Bangladeshi. Mihamitombo isan-taona ny tahan'ny tsy fananan'asa, saingy mba nampahalefy izany ny fitaovana fampidirana ny herin'ny masoandro isan-tokantrano, izay namorona asa mihoatra ny 114.000 tamin'ny fanambatambarana, fivarotana, fametrahana, ary ny fikojakojana ny fitaovana mpitondra ny angovon'ny masoandro. Raha ny marina, efa saiky avy roa heny ny fitomboan'isan'ny asa mifandraika amin'ny herin'ny masoandro tanelanelan'ny taona 2011 sy 2013.
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1996 ny fivarotana fitaovana mitondra ny angovo avy amin'ny masoandro isan-tokantrano tao Bangladesh. Ny Grameen Shakti, sampan'asan'ny Grameen Bank, no nanomboka ny zotra. Tao anatin'ny 18 taona izay dia nahatsangana takela-masoandro mihoatra ny 1,3 tapitrisa ny Grameen Shakti.